Finance Manager | Job in Myanmar ﻿
•	Computer Microsoft office (Internet, Email) ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်င်္ပြီး အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ Certificate, Diploma ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	B.Com ဘွဲ့ ၊CPA ရရှိပြီးသူ ဦးစားပေးမည်။
•	Financial Analysis လုပ်နိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိပြီး အသက် (၅၀) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
Work location No. (F/111),Thudamma Rd, North oakkalapa Tsp,Yangon.
Company Industry: Construction & Trading
40 Days, Full time , Trading
138 Days, Full time , Trading
143 Days, Full time , Trading
171 Days, Full time , Trading
Finance Manager Accountancy jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon.com moon Sun Co.ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Construction & Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon